I-Omiqom yintlobo yesityalo, ekhulwini lwe-VIII-VI BC yayisetyenziswe njenge-spice. Oku kungona nantoni yokuba isityalo kuthiwa "sitsho." Eli gama lesitizo lafunyanwa ngenxa ye-garlic eqinile ye-onion iphunga. Into eyona yonyango kwi-ferula iyona ijusi ye-root. Inamakhi amancedo amaninzi. Namhlanje, i-omik yeengcambu isetyenziswa kakhulu kwiiyeza zomntu. Ijusi layo elomeleleyo liqukethe izinto ezintathu ezibalulekileyo zonyango:
Siyabonga kubo, izinto eziveliswayo ziba sisiseko seziyobisi ezijoliswe kunyango lwezifo ezinzima.
Kwiimeko ziphi iingcambu ze-omicus ezisetyenzisiweyo?
Iingcambu ze-omium inezininzi zezicelo. Ngokwenene, usebenza kwinkqubo ephakathi, kangangokude kuthethwa ukuba wenza imimangaliso, ngoko ingcambu yaphathwa:
Kwaye nangona akusiyo yonke uluhlu lwezifo zendlela yokuhlawula, ezaphathwa ngeengcambu ze-ferula. Ukongeza, isityalo sisetyenziselwa ukunyanga:
Ukuphulukisa iipropati ze-omik ingcambu kwanele ukuphilisa isifo sofuba nesifo sikashukela. Kwimithi yamachiza kunye nemiguqulelo kwisiseko sezityalo zilahla izibungu kwaye zihlambulule umzimba weetyu kunye ne-debris yokutya. Kwakhona, izixhobo ezisekelwe kwingcambu kaFerula zinganqanda izifo ezinjengalezi:
izifo zesibindi, iintso, i-spleen;
Kwi-pneumonia, i-tincture yotywala esuka kwingcambu ye-omic isetyenziswe njengesilwanyana esichasayo, kodwa akufanele sichithwe kakubi, ngaphandle kweminye imiphumo emibi ingabangela.
Ukungqinelana kweso sicelo se-omica
Xa usebenzisa i-root root, kuyafaneleka ukuqwalasela ukuchasana nokusetyenziswa kwayo, oko kukuthi, ukugqithisa iziyobisi. Oku kuyingozi kakhulu, kuba i-toxins ingangena emzimbeni, leyo iyingozi nje, ngoko, ngexesha lokonyango kunye nezilwanyana zamanqanaba ezisekelwe kwingcambu ye-omium, kuyimfuneko ukulandela imiyalelo yokusetyenziswa nokugcina umyinge njengoko i-ferula ingezo zityalo ezinobuthi ezinobuthi.
Ukuze ulungiselele i-tincture, kufuneka:
Gaya ama-50 amagremu ezomileyo izinto eziluhlaza.
Phala nge 500 ml ye-vodka.
I-arhente kufuneka iqhutyelwe iiveki ezintathu, ngelixa ingalibali ukugubha yonke imihla.
Thatha i-tincture kufuneka ibe yipisipuni enye phambi kokutya kathathu ngosuku. Inkqubo yonyango iphela inyanga. Kwakhona i-tincture ingaxutywa amabala amaninzi, amanxeba amanxeba, izilonda zokuvuvukala kunye ne-trophic ulcers.
Unako ukusela isilwanyana ngamanzi. Ikhosi ihlala iintsuku ezingama-40. Yonke imihla, kufuneka udibanise ukuhlaselwa kwehla, ukuqala ngo-1 uze uphele kwi-40. Ngaphambi kokuba uthathe i-drops, phakamisa emanzini afudumele: ama-20 ahla e-500 ml yamanzi.
Ukuze ukhethe indlela echanekileyo yokuthatha iyeza, kuyimfuneko ukubonisana neengcali.
Iifungus of foot - unyango kunye nezilwanyana zomntu
I-Monarda - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
I-Labaznik - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
I-jetver ye-Beaver - iimpawu zonyango
Unyango lwe-tincture yepropolis ngotywala
Ioli ye-sunflower ekuqhenqeni
I-Apple cider iviniga kwimifuno ye-varicose
I-oil-buckthorn oil - isicelo
Ikhokoni - izakhiwo ezixhamlayo
Yenza kwinqwelo, kwaye abamelwane baya kukuthiya!
Ukuthenga okuhlangeneyo - yintoni na nendlela yokwenza imali ngokuthenga ngokubambisana?
Indlela yokuphatha iinyawo ezintle kwiintsholongwane?
Ungayifaka njani umnyango nge-dermantinom?
IiHats eziKhatywayo eziThatywayo 2014
I-beet isobho - iresiphi
Ndingazi njani ukuba ikhefu liya kuqala?
Ukukhulelwa: nini isisu seqala ukukhula?
I-Icelandic moss - isicelo
Indlela yokufumana ikhefu lokubeleka?
Amanqatha ama-Badger - iimpawu zonyango
Isobho se Saury
Qala isitifiketi somtshato - iklasi yeklasi kunye nesithombe
Fleece zangaphantsi zangaphantsi
Iidekethi zengubo ngezandla zabo
Ama-hoodies ama-Women with hood